Bogagga ugufiican ee looga daawado kubada cagta khadka tooska ah BILAASH adigoon isdiiwaangalin | Wararka Gadget
Waqti aan sidaa usii fogeyn, telefishanada gobolka Isbaanishka ayaa iyagu ahaa kuwa go'aansaday ciyaarta kubbada cagta ee la baahinayo. Tani waxay ka dhigan tahay haddii usbuucaas ay jiri lahayd Real Madrid - Barcelona, ​​100% waan hubaa inaan arki doonno iyadoo furan. Laakiin, sida nolosha oo dhan, isboortigu wuxuu noqday ganacsi sii kordhaya oo faa'iido u leh shirkadaha wax ka qora, haddana waxaan daawan karnaa oo keliya hal ciyaar usbuucii, laakiin way adag tahay in qofna daneeyo, maaddaama ay baahiyaan cayaaraha kooxaha safka ku jira kala-soocidda. Haddii qof aad u jecel yahay kubbadda cagta, waa wax la fahmi karo inay ka kireystaan ​​xirmo isboorti adeegga telefishanka laakiin, kuwa innaga ah oo kaliya oo doonaya kaliya daawashada ciyaar waqti ka waqti, waxa ugu fiican ayaa ah Kubadda cagta ka daawo khadka tooska ah bilaash.
Hoos waxaan kuugu soo bandhigi doonnaa degello internet aad ka karto ciyaaraha tooska ah uga daa bilaash adoon isdiiwaangalin. Bogagga looma kala xigo siday u kala tayo iyo muhiimad badan yihiin, laakiin waa lagu daray sidii aannu u booqanaynay. Waxa ugu fiican ayaa ah in iyaga la xakameeyo, gaar ahaan haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan aragno ciyaar muhiim ah oo ay u badan tahay inay ku jirto dhowr degel internet, laakiin xiriiriyayaashu hoos u socdaan.
Isku day bil bilaash ah: Ka hel bil bilaash ah kubada cagta DAZN oo aan lahayn wax ballanqaad ah riix halkan
Kahor intaanan bilaabin, waxaan kuu sheegi doonaa faa'iidooyinka iyo qasaaraha ka jira daawashada ciyaaraha kubbadda internetka. Marka ugu horeysa wax waliba waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican, waana noqon kartaa, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa wax laga xumaado.
1 Faa'iidooyinka daawashada kubada cagta khadka tooska ah ee bilaashka ah
2 Qasaarooyinka daawashada ciyaaraha khadka tooska ah ee bilaashka ah iyada oo aan la is diiwaan gelin
3 Roja Directa, oo ah mid si toos ah looga daawado kubada cagta khadka tooska ah ee bilaashka ah
6 Casaanka tooska ah ee Cas
8 Kubadda Cagta
Faa'iidooyinka daawashada kubada cagta khadka tooska ah ee bilaashka ah
Waa lacag la’aan. Caqli gal, sax?
Waan arki karnaa ku dhowaad ciyaar kasta kubada cagta Waxa ugu fiican ayaa ah in ayna kaliya dhigin xiriiriyeyaasha kulamada horyaalkeena, laakiin sidoo kale waxaan ka heli karnaa ciyaaro ka socda horyaalada kale, xulalka qaranka, iwm.
Waxaan ubaahanahay kaliya biraawsar laga helo internetka.
Qasaarooyinka daawashada ciyaaraha khadka tooska ah ee bilaashka ah iyada oo aan la is diiwaan gelin
Sawirka iyo tayada codku aad uma fiicna. Waa dhif iyo naadir in la helo xiriiriye leh sawir wanaagsan iyo tayo cod leh, laakiin waa macquul haddii aan tixgelinno inaan daawaneyno qulqulka iyo (ku dhowaad) toos ah.
Xayeysiinta xad dhaafka ah. Websaydhada na siiya ciyaaraha kubbadda cagta waxaa ku faafay xayeysiin, si aad u xanaaq badan. Mararka qaar, daaqad pop-up ah ayaa ka muuqata dhexda ciyaarta waana inaan sugnaa 10 ilbidhiqsi si aan uxirno, taasna waa mid kale, mararka qaarkood X been ah ayaa soo muuqata si aan u gujino xayeysiinta.
Mararka qaarkood waa inaan raadi wax ka badan koontada, taas oo waliba noqon karta quus. Haddii ciyaartu ay tahay tii caadiga ahayd ee horyaalka Isbaanishka, waxaan yeelan doonaa xiriiro badan, laakiin kuwa badan ayaa dhici doona inta aan daawaneyno. Taasi miyay tahay sababta liiskan ugu soo bandhignay fursado badan? Waxaa fiican inaad samirto.
ka xiriidhada ayaa dhacaya. Ama halkii, way dhici karaan.
Waxay qaadataa flash Player. Xitaa Adobe ayaa sheegay in laga tirtiro kalsooni darrada. Waa dhif iyo naadir in la helo degel bixiya ciyaaro toos ah oo la shaqeeya HTML5.
100% ma noola. Waxa ugu caansan waa inaan daawano ciyaaraha, waxaan rajeyneynaa, nus daqiiqo dib udhac ah. Maxaan dhibaato ahayn? Haddii aad leedahay deris ku qayliya "Hadaf" markay dhalinayaan gool, waad ogaan doontaa ka hor intaadan naftaada u arkin.
Sida kubada cagta looga daawado khadka tooska ah
Roja Directa, oo ah mid si toos ah looga daawado kubada cagta khadka tooska ah ee bilaashka ah
Direct Cas waa halyeeyga tan tan si loo arko isboortiga internetka. Waxay isku dayeen inay xiraan marar badan, taas oo muujineysa awooddeeda inay ku daawato ciyaaraha khadka tooska ah bilaash iyagoo aan isdiiwaangelin. Waxaan kulan ka leenahay dhamaan horyaalada mana ahan intaas kaliya, maadaama aan xiriir la leenahay ciyaaro badan. Waxay ku siisaa xiriirin degello kale oo badan oo marti geliya dhacdooyinka cayaaraha. Casaanka Tooska ah waa inuu ku jiraa boos caan ah liistadan.
Haddii laga xannibo Spain, in marwalba ay suurta gal tahay ka dib cabashooyinka la helay, waxaad ka heli kartaa rojadirecta.me qarsoodi ama biraawsarka Tor (laakiin waxaan u maleynayaa in Anonymouse uu ka raaxo badan yahay).
Marka bog sida Tooska Cas oo kale ah u galiyo xiriiriyeyaal badan degel ayna si fiican dusha uga muuqdaan, waxaa xiiso leh in la fiiriyo websaydhkaas. Taasi waxay ku dhacdaa Futbolarg, a Websaydhka Argentine kaas oo bixiya ciyaaro bilaash ah oo khadka tooska ah noocyadiisa kala duwan ah. Faallooyinka badanaa waxay leeyihiin lahjad Argentine ah, laakiin taasi macno malahan. Xitaa waa wax fiican, tan iyo markii ay ra'yigu waa ujeedo badan haddii aan ka daawanayno Spain maxaa yeelay ma haystaan ​​koox Isbaanish ah oo ay jecel yihiin.
Intergoles waa degel na siisa xiriiriyeyaal ku jira bogagga kale, sida Roja Directa ama Pirlo TV. Midda dambe waxay u baahan tahay diiwaangelin, sidaas darteed waxaa habboon in la booqdo Intergoles oo la daawado ciyaaraha TV-ga ee Pirlo iyada oo aan loo baahnayn in la isdiiwaangaliyo.
Casaanka tooska ah ee Cas
Waxay ku dhowdahay magac la mid ah kan koowaad ee liistadan, laakiin ma aha isla degel websaydh ama milkiileyaal isku mid ah. Roja Directa Online waxay na siisaa ciyaaro kubbadda cagta ah oo bilaash ah waddan kasta ama tartan kasta, labada koox qaran iyo naadiyo, labadaba horyaallada iyo tartamada qaaradda. Shabakada waxay ka digayaan in xiriiriyeyaasha la dhigi doono wax yar uun ka hor inta aysan ciyaartu bilaaban, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in daqiiqado ka hor la galo oo la cusbooneysiiyo biraawsarka.
Bog aniga waqti hore la igula taliyay, waxaan u arkaa mid aad u xiiso badan sidoo kalena leh naqshad wanaagsan waa Livefootballol. Haddii aan eegno dhanka bidix, waxaan aragnaa inay jiraan ficil ahaan dhammaan horyaalada kubadda cagta, ugu yaraan kuwa Yurub. Haddii aan gujino horyaal kasta, waxaan arki doonnaa inay maran tahay mooyaane maalinta ciyaarta. Tani waxay webka ka dhigeysaa mid aad ugafiican xaga aragtida, laakiin waxay dhadhan xun uguleedahay afkeena oo aan ka takhaluso markay ciyaar jirto Shaki la'aan, waxaan u maleynayaa inay tahay inaan ku sii heyno kuwa aan jecel nahay haddii aan jecel nahay Kubadda cagta ka daawo khadka tooska ah bilaash mar mar.
Mid kale oo aad loogu taliyay ayaa ah Kubadda Cagta. Naqshadeynta bogga, cinwaanka madaxa, ma ahan mid soo jiidasho leh, waa in la yiraahdaa. Sikastaba, waxa ina xiiseynaya ayaa ah isku xirayaasha iyo Kubadda Cagta ee Kubadda Cagta waxaan awoodi doonnaa inaan aragno kulamada horyaalada ugu muhiimsan sida Ingiriiska, Isbaanishka, Talyaaniga ama Jarmalka. Maaddaama aysan si kale u noqon karin degel loogu talagalay ciyaarta quruxda badan, waxay sidoo kale muujinayaan ciyaaro kooxaha qaranka ama tartamada qaaradda.
Dhammaan xulashooyinka aad dooneysaa inaad ku daawato kubadda cagta khadka tooska ah ee bilaashka ah? Ma jiraan wax intaa ka badan oo aad rabto inaad ku darto oo aanan soo xusin sidaa darteed waan awoodnaa ciyaaraha tooska ah uga daa bilaash adoon isdiiwaangalin? Noo sheeg khibradaada iyo haddii aadan wali hubin halka laga daawan doono kubada cagta, xusuusnow in DAZN ay ku siiso bil bilaash ah haddaad iska diiwaangeliso hadda dhiirrigelintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Burcadbadeednimada » Kubadda cagta khadka tooska ah uga daawo
Toshiba waxay bilaabeysaa darawallada SSD-ga oo leh illaa 30 TB meel bannaan ah
Uhans Xusuusin 4, oo leh 3GB oo RAM ah oo ka hooseeya 100 euro [DIB U EEGID]